Dhibaatooyinka naga haysta DNS | Laga soo bilaabo Linux
Dhibaatooyinka naga haysta DNS
Isticmaalayaasha qaaliga ah:
Waxaan rabnaa inaan kaa raali galino cilladaha galabta dhacayay. Xaaladdu waa tan soo socota. Waxoogaa isbeddel ah ayaan ku sameeyay Magaca Server taasi waxay tilmaamaysaa bartayada, adoo qaar ku daraya DNS Secondary ahaan keyd ahaan
Sababo jira awgood, halka Aagagga iyo Diiwaangelinta la cusbooneysiiyey, meelo kala duwan oo meeraha ah halkii aan ka geyn lahaa bartayada, waxaan kiciyey bog GoDaddy. Sida muuqata, si tartiib tartiib ah xiriiriyadii dib ayaa loo asaasay, laakiin nasiib daro waxyeelada ayaa horay loo sameeyay. Waan kaa raali gelinayaa maxaa yeelay wax fikrad ah kama qabin inay taasi dhici karto. Qaladkeygii ugu horeeyay wuxuu ahaa maan soo wargalin in isbadalo la sameynayo, laakiin markale ma dhici doonto
Fadlan, haddii qof uu dhibaato haysto, nala soo socodsii inuu qabo a Jawaab-celinta arrinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Dhibaatooyinka naga haysta DNS
Laga soo bilaabo Mexico Wax dhibaato ah kuma qabo galitaanka barta
Kusoo dhawow Tababaraha
Waad ku mahadsantahay jawaab celinta ..
Eduard2 waxay umuuqataa inay dhibaatada kujirto golaha dhexdiisa, qoraalkan ayuu ku xusay
Waxaan ugu jawaabay inaad adigu xalka hayso.
Marka hore aad baad u mahadsan tahay Oscar: Adigu waxaad ahayd qofkii ugu horeeyey ee soo tabiya dhibaatada waxaadna u noqotay tijaabo xalka ku meel gaarka ah. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii la soo xiriirtay KZKGGaara oo na caawisay.
Waxay noqon laheyd lagama maarmaan in la arko in Eduar2 wali dhib ku qabo taas, sababtoo ah dhowr saacadood ayaa ka soo wareegtay markii uu faallooyinkaas bixiyay ..
Goobaha, xilligan, seddex subaxnimo Spain, ma galo.
Waad ku mahadsantahay FeedBack iyo Soo Dhaweynta Esmorga ..
Muddo ka dib ayaan sawirka geliyey mugga troll, waxaan awooday inaan si caadi ah u soo galo: D, dhibaatadu waxay ka taagneyd madasha.
Laga soo bilaabo Chile wax dhibaato ah kuma qabin isku xirka goobta maalintii.
Moscosov aad baad ugu mahadsantahay caawimada aad na siisay. Waxaan noqon doonaa weligiis mahad.
+ 1… xaqiiqdii WAAD MAHADSAN tahay gracias
Weligay wax dhibaato ah kuma qabin bogga. Haddii aan wax ka ogaado dhibaatooyinka, waxay ka timid qoraallada ay wax ka qoraan.
Laga soo bilaabo Biljum hadda waxaad ka geli kartaa dhammaan qaybaha dhibaato la'aan.
Hadda waxaan arki karaa oo keliya baloogga, ama goleyaasha, ama dhejiska, ama shabakadda microblog.
Hagaag aniga oo kale markaa
Okay. Waan ku faraxsanahay haddii aad sii wado inaad ii soo sheegto haddii aad dhibaatooyin mar dambe la kulanto ..
Aniga oo ka socda Guadalajara Jalisco Mexico shalay ma gali karin goobtaan ama fagaaraha, xalay waxaan gali karay labada goobood.
Maantana dhibaato la’aan
Waad mahadsantahay problem Dhibaato kasta oo aad noo sheegto, ok?
Dhawr daqiiqadood ka hor waxaan qarka u saarnaa inaan ku bixiyo foomka caawimaadda, anigoon hadal dheeraad ah iga qaadin ayuu iga saaray bogga oo ma geli karo.
Laakiin isagu ma kaa saaray mise waa adigu ma heli kartid?
Waan ogolaaday, aqriyay boostada, waxaan kusoconayay xisaabteyda iyo furaheyga sirta ah, halkaasna wey igala baxday, daqiiqad kahor waan awooday inaan galo, suaashii waan kajawaabay mana ka dhaqaaqi karo halkaas, ficil kasta oo aan sameeyo wuxuu ka saarayaa qaladka firefox uusan helin serverka.
Wax la mid ah ayaa igu dhaca IE, Firefox iyo Chrome.
Waa isla qaladkii aan haysto
Cadeynta in qaladku yahay kaliya hadii aan isku dayo inaan udhaqaaqo gudaha golaha, banaanka golaha waxaan udhaqaaqayaa shabakada dhib la'aan.
Waxaan u maleynayaa inay tahay isku dhac u dhexeeya labada DNS. Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan go'aan gaaro:
- Ama uga tag sidii hore.
- Ama labada mid ka saar.
elav, mid kale ayaan helay, waxaan u maleynayaa, dhibaato markii aad gujineyso Ranking Linux inay kuu geyneyso blog kale, ma qaladbaa mise si ula kac ah baa loo sameeyay? Tan waxaan kuu sheegayaa tan iyo markii hore boosku ka muuqday Liiska Linux.
Taasi ma aha qaladkeena. Qiimeynta Linux ayaa sidaas sameysay maalmo.
Ma geli karo labada madal ama microblog-ka midkoodna. Haddiise ay tahay inaad mid ka mid ah ka saarto, waxaan ka saari lahaa microblog maadaama madashu ay waxtar badan u leedahay dadka shakiga qaba. In kasta oo microblog uusan fiicnayn. Go'aan adag.
Waan ku raacsanahay rogertux, golaha ayaa waxtar badan leh.
Iyo haa, go'aan adag.
Waan saxaa naftayda: go'aanka.
Tan iyo shalay ma gali karo madasha… Waxaan joogaa Argentina !!
Koolku ma shaqeeyo hehe
Haye, waxaan ka imid shaqada oo ma geli karo golaha halkaan. Qosol badan maxaa yeelay waxaan u jiraa 4km ... Ma aqaano haddii buundada ay ka duwanaan doonto ama waxa dhici doona, laakiin halkan laga bilaabo ima ogolaanayo 🙁
Waan sii wadi doonaa isku dayga.
Ma aqaano haddii aan qof neceb yahay laakiin kaliya kuma guuldareysto Firefox, sidoo kale Liferea waxaa ku guuldareystay xiriirkii RSS golaha.
Salaan iyo xasillooni inaad tahay ganacsigii ganacsiga!
Ku jawaab Kikollo
Laga soo bilaabo Peru oo dhan wanaag (Forum, Paste, Blog sidoo kale DL.net)
Haddana markaan eegay, ma ogi inay wax ku lahaan doonto, labadan faallooyin waxaa la daabacay Disember 9, 2011 19:00 PM.
Waxa ku soo baxa bogga waa «La dhejiyay Diseembar 9, 2011 at 12:58 PM
Halkan laga bilaabo golaha iyo tt ha i tagin. Markaad isku dayeyso inaad gasho waxay siisaa khaladka "server not found" ee caadiga ah iyo codsiyada dns ma soo celiyaan ip ip ...
Dhibaatooyin daran ayaan kala kulannaa nacaladda GoDaddy. Xalka kaliya ayaa ah in la helo DNS-ka tilmaamaya martigelinteena mar labaad sidii ay ahayd ilaa shalay. Faa'iido darrada tani waa tan hadda KZKGGaara iyo aniga midna ma lihi internetka si aan isbeddellada ugu sameeyo mar kale. Haddii uu jiro qof xiiseynaya caawinta, fadlan noo soo sheeg foomka xiriirka.
Xfce waxay ubaahantahay caawimaad mashruucyada qaar
Wireshark: Falanqee taraafikada shabakaddaada